Mayorka Magaalada Lewiston oo ka caraysiiyey Soomaalida Maraykanka (Sawiro) - Horseed Media
Mayorka Magaalada Lewiston oo ka caraysiiyey Soomaalida Maraykanka (Sawiro) October 5, 2012 Share this:FacebookTwitterGoogleMid kamid ah Joornaalada cusnuriga ah waxa uu ku tilomaamey dadkaan in ay dhexlugeynayaan Lewiston oo u ekeysiiyiin dunida saddexaadDuqa magaalada Lewiston ee gobolka Maine cariga Maraykanka Robert Mcdonald ayaa sheegay in aan loo baahneyn in dadka Soomaalida ah ay u dhaqmaan qaabkii ay u dhaqmi jireen markii ay joogeen dalkoodi, waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in dhaqamadooda ay uga soo tagaan dalkoodi lana qabsadaan dhaqanka Maraykanka gaar ahaan labiska haweenka.
Soomaalida ku dhaqan magaaladaas ayaa dhigey dibadbaxyo ay uga cabanayaan hadalka Mayorka, kaas oo ku nool dal ku naalooda xoroyadda qofka in uu ilaaliyo, taas oo dhigeysa, Xoroyada hadalka, tan diinta iyo dhaqamada kala geddisan.
Soomaalida oo sita boorar ay ku qorantahay erayo ay ka mid yihiin adiguba Mayorkayagii ayaad tahay”, Magaalada Lewiston waxay ku wanaagsan tahay si aan sidaan ahayn” iyo erayo kale.
Robert Mcdonald ayaa shir jaraa’id uu qabtey bixiyey wax u eg raali gelin laakiin waxa uu ku adkeystey in loo baahan yahay in Soomaalidu dadka dhexgalaan oo sida wax ka bedalaan. Mcdonald ayaa sheegay in hadalkiisa meel aan ahayn meeshii uu rabey loo leexiyey, waxaana uu hoosta ka xariiqey in hadalkiisu ku saabsanaa in ay bulshada dhexgalaan bartaan dhaqanka Maerica.
Magaalada Lewiston waxaa ku dhaqan Soomaali gaareysa toban kun oo qof, waxaana inta badan halkaas ay ku tageen nidaamka dib u dejinta ee qaxootiga.